Ndị njem nlegharị anya Seychelles na Qatar Airways na ndị mgbasa ozi Switzerland na -ekerịta Ọganihu Ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ndị njem nlegharị anya Seychelles na Qatar Airways na ndị mgbasa ozi Switzerland na -ekerịta Ọganihu Ọhụrụ
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Iwughachi • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Ndị njem nlegharị anya Seychelles na Qatar Airways
Ndị njem nlegharị anya Seychelles na onye ọrụ ụgbọ elu Qatar Airways agbasiwo mbọ ike iji mee ka visibilụ njem ha dị na Switzerland site na ịhazi nzukọ na njem, mgbasa ozi na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na Zurich na Tọzdee, Septemba 23.
Ihe omume abụọ bụ iji mee ka ndị mmekọ mara ihe na -eme na Seychelles.
Isiokwu gụnyere usoro nchekwa, ihe nkiri ọhụrụ, yana akụkọ kacha ọhụrụ sitere na Qatar Airways na nhazi ụgbọ elu na Seychelles.
Nzukọ ndị ahụ mere ka ọnụnọ mba a n'ahịa sie ike ma mesie ndị mmekọ obi ike na njikọta na obere agwaetiti ya dị.
Ihe omume ahụ n'onwe ya, nke emere na Savoy Baur en Ville na Zurich, gosipụtara ọgbakọ mkparịta ụka nke emere maka nri ụtụtụ, yana nzukọ nri ehihie na-adọta ndị mmekọ mgbasa ozi 12 na ndị njikwa ngwaahịa 15.
N'ịbụ onye Oriakụ Bernadette Willemin, onye isi nchịkwa ahịa maka Njem nlegharị anya Seychelles, na Maazị Antonio Panariello, onye njikwa azụmaahịa Switzerland na Qatar Airways, ihe omume abụọ a bụ ime ka ndị mmekọ ha mara ihe na -eme na Seychelles, usoro nchekwa, ihe nkiri ọhụrụ, yana akụkọ kacha ọhụrụ sitere na Qatar Airways na usoro ụgbọ elu na Seychelles.
N'ikwu okwu site na Zurich, Oriakụ Willemin gosipụtara na njem nlegharị anya Seychelles na -akwado maka usoro mgbake ọzọ maka ebe a na -aga, nke izu ụka gara aga dekọrọ onye ọbịa 100,000 ya maka afọ.
“Ka ndụ ji nwayọọ nwayọọ na -alaghachi na nkịtị, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na -arị elu na Europe, a na -ebelatakwa mmachibido njem na njem gburugburu ụwa. Ụgbọ elu na -amaliteghachi ọrụ ha, ebe ndị bi na Seychelles na -anụrị otu n'ime ọgwụ mgbochi kacha elu n'ụwa, Njem nlegharị anya Seychelles nwekwara ike ịmaliteghachi mmemme nkwado na kalenda ya. Ọtụtụ ihe na -eme n'ahịa anyị niile. Ihe omume taa na Switzerland, nke anyị mere na mmekorita ya na Qatar Airways, bụ iji mee ka ọnụnọ anyị dị n'ahịa ma mesie ndị mmekọ anyị obi ike na njikọta na obere agwaetiti anyị dị, ”Oriakụ Willemin kwuru.
Antonio Panariello, onye na -ahụ maka azụmaahịa Switzerland na Qatar Airways kwuru, sị: “Ọ bụ ihe ọ pleasureụ ịbịa ebe a taa wee nabata mmemme a yana ndị njem nlegharị anya Seychelles. Njikọ dị n'etiti Qatar Airways na Seychelles siri ike ma dịkwa mkpa. Ebe a na -enwe mmasị dị ukwuu n'ahịa Switzerland, anyị nwekwara mpako na anyị nwere ike ịkwalite ebe a yana ndị njem nlegharị anya Seychelles. ”
N'ihe dị mma, ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ndị mmekọ nọ na mmemme abụọ ahụ toro gọọmentị Seychelles na ụlọ ọrụ n'ozuzu ya maka ịdị n'otu ya na nka nkwukọrịta mara mma n'oge ọrịa.
Ihe omume a na -eso njem mgbasa ozi na nso nso a na Seychelles nke ụlọ ọrụ Qatar Airways Switzerland na -akwado nke ndị mmekọ ụlọ nkwari akụ Constance Lemuria Resort, STORY Seychelles, Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa na Kempinski Seychelles Resort.
Seychelles mechara mmeghe nke ndị ọbịa si mba ọzọ mepere oke ya na Machị 25, 2021. Switzerland ka ọ dị ugbu a n'afọ a nyere onyinye ahịa 3% nke ndị ọbịa bịara.